Reer Mudug oo Ganacsigoodi hakiyay kadib Markii Puntland ay kusoo rogtay Canshuur Dheeri ah. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaReer Mudug oo Ganacsigoodi hakiyay kadib Markii Puntland ay kusoo rogtay Canshuur Dheeri ah.
February 20, 2020 marqaan Faalloyinka, Puntland, Somali News 1
Goobaha ganacsiga waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, ayaa maanta oo Khamiis ah xiran, kadib markii ganacsatada magaaladu ay cabasho ka muujiyeen ,canshuur dheeraad ah oo ay ku soo rogtay Wasaaradda Maaliyadda Puntland.
Ganacsatada, ayaa ka cabanayaa canshuurta iibka ee loo yaqaan “Macaash-mashaac-ka” taasi oo ay sheegeen in wasaaradda Maaliyaddu horay ugaga qaadi jirtay kastamyada oo keliya, haddana ay bilowday in ay mid labaad ka qaaddo goobaha ganacsiga ee gudaha magaalada.
Qaar kamid ah Ganacsatada, oo maanta Warbaahinta isu’gu yeeray, si ay cabashadooda u muujiyaan, ayaa dhammaantood xabsiga loo taxaabay, inkastoo mudda kooban kadib xorriyadooda dib loogu celiyay.
Saddex weriye oo muuqaallo ka duubayay ganacsatada, ayaa iyana si kooban xabsiga loo dhigay, balse markii dambe la sii daayay. Cabdiweli jaamac Cagaarane, Axmed Caana-geel iyo Siciid Nadaara, ayaa sidoo kale sheegay in laga qaaday qalabkii ay wax ku duubayeen, islamarkaana jir-dil loo gaystay.
Dhinaca kale, Wasaaradda Maaliyadda Puntland weli wax jawaab ah kama bixin, cabashada ka imaanaysa ganacsatada Gaalkacyo ee ay ka muujiyeen canshuurta iibka.
Shirkad Duulimaad oo shaacisay in ay joojisay duulimaadyo ay ku tagi jirtay Muqdisho + Sabab cajiib ah.
Dad Gudaha Iiraan ugu Dhintay Caabuqa Coronavirus “Siduu dalkaasi ku galay Cudurkaan?”.
Shacabka iyo ganacsatada in marka hore idaacadaha baraarujin iyo wacyi galin baahsan baabka canshuuraha loogu sameeyo ayuu ahaa waajibka ugu horreeya ee maamulka Puntland looga baahnaa in uu fuliyo. Dad u bisil baa canshuurta si daacad ah u dhiibi kara iyaga oo ku qanacsan in ay bulshadooda wax weyn ku tarayaan.
Sida cabashadan iiga muuqata canshuurta kastamka iyo canshuurta manashiibbiyada (dowladda hoose) ayaa ganacsatadan iska qaldamay oo loo baahnaa in marka hore farqiga u dhexeeya loo kala saaro oo laga dhaadhiciyo. Soomaalidu sideeda ba waa duulka keli ah dunida intaas la’eg aadka u jacel in wax walba loo qabto aanay se iyagu hal senti ku darsanin.
Haddii canshuurahooda wax la tabi karo loogu qaban lahaa cidi hadal kama keenteen ee dhibtu waa musuqmaasuqan ku baahay bulshadan khamsaanta iyo cumaamadaha gashan oo tusbaxyada dhaadheer wata. Yaabnay anagu!